डा. नोहुहिरो चुबोई | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता डा. नोहुहिरो चुबोई
डा. नोहुहिरो चुबोई
स्वस्थ विचार र शुद्ध आचरणविना सहकारी आन्दोलन सफल हुन सक्दैन
वरिष्ठ सहकारी स्वयम्सेवक
जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)
कृषि तथा अर्थशास्त्रमा टोकियो विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका डा. नोबुहिरो चुबोई यसअघि सन् १९७० मा नेपाल आएका थिए । बागवानी फार्म चितवन र जनकपुर अञ्चल विकास परियोजनामा ४ वर्षकाम गरी १९७५ मा जापान फर्केका चुबोई पुनः जाइकाको वरिष्ठ स्वयम्सेवकका रूपमा गत हप्ता नेपाल आएका छन् । जापानमा केन्द्रीय सहकारी बैङ्कको ग्रामीण वित्त अनुसन्धान संस्थाका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि, वन तथा मत्स्य पालन मन्त्रालयका शाखा प्रमुख र ग्रेजुयट स्कूल अफ सुकुवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भएर अनुभव बटुलेका चुबोई नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिसँग आबद्ध भएर स्वयम्सेवकका रूपमा २ वर्षकाम गर्न नेपाल आएका हुन् । जापानको सहकारी आन्दोलन, कृषि क्षेत्रको स्थिति र नेपालमा उनले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा ँआर्थिक अभियान’ दैनिकका यादव थपलियाले ६७ वर्षीय डा. चुबोईसँग गरेको कुराकानीको सारः
लामो समयपछि दोस्रोपटक नेपाल आउनुभएको छ । कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
झण्डै ४० वर्षपछि नेपाल आएको हुँ । त्यतिबेलाको र अहिलेको वातावरण तुलनै गर्न नसकिने भएछ । यद्यपि, अहिलेको सम्पूर्ण अवस्था मैले अध्ययन गर्न भ्याएको छैन । १९७५ ताका नेपालको जनसङ्ख्या १ करोड २० लाख थियो । खाद्यान्न पर्याप्त थियो र लगभग सबै जनता कृषिमा संलग्न थिए । तर, पनि गरीबी व्याप्त थियो । त्यतिखेर विकासका निम्ति नेपालको हरित क्रान्तिको लक्ष्य केही हदसम्म सफलतातर्फ बढिरहेको थियो । तर, आजको अवस्था बेग्लै देख्दैछु । उपत्यकाको अति जनघनत्व र आधुनिकीकरणले असाध्यै प्रदूषण बढाएको रहेछ । आधुनिक सोचरहित आधुनिकताको अन्धानुकरणले काठमाडौं र पाटनलाई हेर्दा १९७० ताकाका बिहारका पुराना स्थानीय शहरको झझल्को आउँछ । म लामो समयपछि भर्खर मात्र नेपाल आएको हुँ । नराम्रा कुरा मानिसको नजरमा तुरुन्तै पर्छन् । त्यसैले पनि मैले यहाँका नराम्रा कुरा मात्रै धेरै देखेको हुन सक्छ । यस अवधिमा राम्रा कामहरू के के भएका रहेछन्, तिनका बारेमा अध्ययन गर्न त समय लागि हाल्छ नि ।
तपाईंको अनुभवमा नेपालको विकासको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
सन् १९८० मा बैङ्ककको विकास जुन स्तरमा पुगेको थियो, नेपाललाई त्यो स्तरसम्म पुग्न कति समय लाग्ने हो अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन । अझै पनि अधिकतम नेपाली जनता कृषि व्यवसायमै संलग्न रहेकाले नेपालको विकासका निम्ति कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । नेपालमा अहिले कृषिबाट नै रोजगारीको सृजना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । ग्रामीण विकासका निम्ति कृषि क्षेत्रको विकासको कुनै विकल्प छैन । यद्यपि, कृषिमा विकास भइहाल्यो भने पनि आन्तरिक खाद्यान्न माग र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा आत्मनिर्भरता बढाउन तत्कालै कठिन देखिन्छ । यसका निम्ति नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास अपरिहार्य छ ।
नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र व्यवसायको अपार सम्भावना छ । हिमालको काखमा रहेको नेपालमा पर्यटन व्यवसाय रोजगारी सृजना र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एक मात्र मुख्य स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । तर, नेपालले विगत ४० वर्षमा निरन्तर पर्यटनका धेरै राम्रा स्रोत र पूर्वाधार गुमाउँदै गएको अनुभूति मैले गरेको छु । अर्को कुरा, नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना पनि अत्यन्तै धेरै छ । तर, जलविद्युत् विकासका लागि अत्याधिक पूँजी र प्रविधि आवश्यक पर्ने भएकाले यो त्यति सजिलो छैन । यसका लागि वैदेशिक ऋण र सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ । त्यसपछि विद्युत्को विकास भइहाल्यो भने पनि कृषि र पर्यटनले जत्तिको रोजगारी यसबाट हुन सक्दैन । त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको विकासको भविष्य कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को विकास मै देखेको छु ।
पर्यटन विकासका निम्ति के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
पर्यटन विकासका निम्ति चारओटा तत्त्व आवश्यक पर्दछ- प्राकृतिक स्रोत, समाजिक स्रोत, पूर्वाधार र सामाजिक पूँजी । प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत हिमाल, पहाड, वनजङ्गल, खोलानाललगायतका विषय पर्छन् । नेपालमा यिनको कुनै कमी छैन । मौलिक संस्कृति र धर्म, सांस्कृतिक सम्पदा जनताको जीवनशैली, शहरको दृश्य र बनावट, ऐतिहासिक क्रियाकलाप सामाजिक स्रोतअन्तर्गत पर्ने कुरा हुन् । यी स्रोतहरूलाई पर्यटन विकासका निम्ति जहिले पनि बचाएर राख्नुपर्छ । सडक, यातायात, पैदल मार्ग, विमानस्थल, शहरमा होटेल, लज, खानेपानी र सरसफाइको सुविधा पर्यटन पूर्वाधारका आवश्यक तत्त्व हुन् । यिनको विकासर्विना पर्यटनको विकास सम्भव हुँदैन । त्यस्तै, सामाजिक पूँजी पर्यटन विकासका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सेवा-सत्कारप्रति नागरिक जागरुकता, प्रभावकारिता र सेवाको विश्वसनीयता सामाजिक पूँजीका अभिन्न तत्त्व हुन् । यी चार तत्त्वका व्यवस्थित र सुन्दर समायोजन गर्न सक्ने हो भने नेपाल विश्वकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्छ । यी यस्ता कुराहरू हुन्, जो बोलेर या कागजातमा तोकेर मात्रै सम्भव हुँदैन । यसलाई व्यवहारमै उतार्न सक्नुपर्छ । नेपालले इमानदार प्रयास गर्ने हो भने लक्ष्य प्राप्ति गर्न त्यति कठिन चाहिँ छैन ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
नेपाल प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै धनी र सुन्दर देश हो । सानो देश भएर पनि यहाँ संसारका प्रायः सबै ठाउँमा पाइने हावापानी र वातावरण उपलब्ध छन् । यहाँको क्षेत्रगत वातावरण र हावापानीअनुरूप विविध बाली, फलफूल र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ । सन् १९७० मा मैले चिवतनको भरतपुरस्थित सरकारी बागवानी केन्द्रमा ३ वर्षकाम गरेको थिए । जनकपुरमा पनि १ वर्षबसें । तराई, भित्री मधेश, पहाड र हिमाल गरी नेपालमा जहिले पनि चार प्रकारका वातावरण रहन्छ । मौसमी र बेमौसमी सबै खेतीको यहाँ प्रचुर सम्भावना छ । तर, अल्छी गरेर हुँदैन । सबैले जाँगर देखाउनुपर्छ । उन्नत बीउ, प्रविधि, मल र सिँचाइ कृषि विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् ।
नेपालको कृषि सहकारी क्षेत्रमा केके सिकाउने तयारी गर्नुभएको छ ?
म सिकाउन आएको होइन, एक आपसमा मिलेर सँगै काम गर्न आएको हुँ । मेरो अनुभव तथा दक्षता र यहाँको अनुभव तथा दक्षतालाई एक आपसमा साटासाट गरेर कृषि सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने अवश्य पनि केही राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ । मैले जानेको र बुझेको नेपालाई दिन्छु नेपालको जानेको र बुझेको मैले लिन्छु भन्ने मेरो धारणा हो । यद्यपि जापानको सहकारी आन्दोलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रका सम्वनधमा मेरो लामो अनुभव छ । मेरो त्यो अनुभव नेपाली साथीहलाई काम लाग्ला/ नलाग्ला, म अहिल्यै केही भन्न सक्ने स्थितिमा छैन । मेरो एउटै बुझाइ छ, नेपालको उन्नतिका निम्ति कृषिक्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । यसबाट मात्र ग्रामीण किसानको उत्थान हुन सक्छ । त्यसैको लागि म आएको हुँ । तर, मेरो विचारले काम गर्छ कि गर्दैन भन्न अहिल्यै सक्दिनँ ।
तपाईंले केही योजना त बनाउनुभएको होला नि ?
केही न केही त पक्कै पनि सोचेको छु । तर, अहिले त कृषि सहकारी क्षेत्रका साथीहरूलाई भेटेको पनि छैन । त्यसैले अहिल्यै केही भन्नु चाँडो हुन्छ । तर, जापानको कृषि सहकारी कसरी अघि बढेको छ । यसबारेमा साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्ला भन्ने सोचाइ छ । तर, त्यो सोचाइ नेपालका साथीहरूलाई मन पर्छ/ पर्दैन, यसै भन्न सक्दिनँ । त्यसैले यहाँ कृषि सहकारी क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर मात्र ठोस योजना बनाउने सोचाइमा छु । त्यसमा पनि यहाँको आवश्यकता के हो, के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसको बारेमा नबुझी केही गर्नु र भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।
जापानमा कृषि सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?
जापानमा कृषि सहकारी संस्थाहरू धेरै उन्नत छन् । त्यहाँ शहरमा कम र ग्रामीण भेगमा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । तर, जापानको ग्रामीण भेग पनि अत्यन्तै उन्नत र विकसित छ । सन् १९४७ मा कृषि सहकारी संस्थासम्बन्धी कानून लागू भएपछि जापानमा आर्थिक सङ्गठनका रूपमा कृषि सहकारी संस्थाहरू स्थापना हुन शुरू गरे । सहकारीहरूद्वारा नै आपसी बीमा क्रियाकलाप पनि सञ्चालनमा छ । १९५० सम्म पुग्दा नपुग्दा जापानमा झण्डै २० हजारको सङ्ख्यामा सहकारीहरू पुगेका थिए । तर, १९६१ मा कृषि सहकारी एकीकरण कानून बनेपछि प्रारम्भिक बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीको संस्था एक तिहाइले घटयो । अहिले त बहुउद्देश्यीय सहकारी ७ सय ५४, पशुपालनमा १ सय ३७, दुग्ध उत्पादक र डेरीमा १ सय ९८ र बागवानीमा २ सय ८६ सहकारी संस्था क्रियाशील छन् । सहकारी संस्थाहरूले बीमा स्वास्थ्य, बचत तथा ऋण, कृषि, माछा पालन, वन पर्यटन मौरी पालनजस्ता सबै क्षेत्रका कामहरू गरिरहेका छन् । जापानमा एकल उद्देश्यीय सहकारीहरू लगभग ३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू लगभग १ हजार ५ सय छन् । यी पनि निरन्तर एकीकरण भइरहेका छन् । सहकारी आन्दोलनमा लाग्ने कर्मचारी र अधिकारीहरू ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि जापानमा सन् १९६९ मै केन्द्रीय कलेजको स्थापना भएको छ । यसले सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त र आदर्शका साथै व्यावहारिक ज्ञान पनि दिँदै आएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने जापानको कृषि सहकारी आन्दोलन अत्यन्तै व्यवस्थित उन्नत किसिमले अघि बढेको छ ।
जापानमा कृषि क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
त्यति धेरै राम्रो छैन । जापानमा ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ । त्यसबाट कुल आवश्यकताको ४० प्रतिशत मात्र खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । अन्य ६० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ । जापानको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड ६० लाख छ । त्यसमध्ये जम्मा २० लाख किसान छन् । यसमा पनि १० प्रतिशतले मात्र खेतमा काम गर्छन् । अरू किसान उद्योग धन्दामा लागेका छन् । जापानी किसान कृषिबाट भन्दा उद्योगबाट धेरै कमाउँछन् । दूध, मासु, धानभन्दा जापानमा तरकारीको उत्पादन बढी हुन्छ । त्यसपछि फलफूलको उत्पादनमा पनि किसानले विशेष ध्यान दिएका छन् । कृषिका प्रायः सबै काम सहकारीमार्फत नै हुन्छन् । जापानमा औद्योगिक स्थिति सुदृढ हुँदै जाँदा कृषिक्षेत्रप्रति किसानको ध्यान कम जान थालेपछि कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै आएको हो । कृषिमा कम आम्दानी हुने हुनाले पनि किसानहरू उद्योग उन्मुख भएका हुन् ।
देश विकासका निम्ति सहकारी संस्थाहरूको योगदानलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?
यो देशअनुसार फरकफरक हुन्छ । अमेरिकामा कम्पनीको योगदान बढी छ । यूरोपमा सहकारीको योगदान बढी छ । तर, विकासोन्मुख देशका निम्ति निश्चय पनि सहकारी राम्रो कुरा हो । तर, यसमा विचारको विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सहकारी संस्थाहरू संस्थागत रूपले सदस्य केन्द्रित भएर चले भने निश्चय पनि यो उपलब्धिमूलक हुन्छ । तर, अनुशासनहीन रूपमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालित भए भने त्यसले मुलुकलाई फाइदाको सट्टा नोक्सान पुर्याउने सम्भावना हुन्छ । सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता सहकारी सञ्चालनको मुख्य आधार हुन् । स्वस्थ विचार र शुद्ध आचरण विना सहकारी आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।
जापानमा सहकारीहरूबीच एकीकरणपछि संस्थाहरू धेरै घटेको रहेछन् । नेपालमा पनि सहकारीबीच एकीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता ठान्नुहुन्छ ?
जापानमा भएको सहकारी एकीकरणमा धेरै विचार पुर्याइएको छैन भन्ने मेरो धारणा छ । विचार नपर्याई गरिएको एकीकरणले कालान्तरमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । सन् १९५० मा जापानका हरेक गाउँमा सहकारी संस्था थिए । त्यसले स्थानीय जनतालाई धेरै सजिलो बनाएको थियो । एकीकरणपछि किसानहरूलाई अप्ठयारो परेको पनि महसूस गरिएको छ । बीमा, बचत, ऋणजस्ता सहकारीहरूको एकीकरण गर्दा खासै फरक पर्दैन । तर, कृषि उत्पादन, रासायनिक मल र मेशिन औजार विक्री गर्ने सहकारीहरू धेरै ठूला भए भने किसानहरूलाई त्यति फाइदा हुँदैन । तर, यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । त्यसैले मेरो विचारको कुरा गर्ने हो भने विषयगत सहकारीहरूको एकीकरण गर्दा आफ्ना सदस्यहरूको सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र गर्नुपर्छ । त्यसै पनि सहकारी संस्थाहरू धेरै भएर खासै फरक पर्दैन । तथापि यी संस्थाहरू सैद्धान्तिक रूपले सहकारीका आदर्श, मूल्य र सिद्धान्त अनुरूप चल्न आवश्यक छ । कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने गरी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । जापानमा गरिएका कतिपय सहकारी एकीकरणपछि संस्थाको प्रभावकारितालाई ध्यान दिइएन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।